मलाई र प्रचण्डलाई अप्ठेरो छ – ओलीले थुन्ने योजना बनाए ! - News25 Daily
July 5, 2020 adminLeaveaComment on मलाई र प्रचण्डलाई अप्ठेरो छ – ओलीले थुन्ने योजना बनाए !
काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधव नेपालका भने अचेल गज्जबका तर्क छन्। उनी आफूलाई ओलीले थुन्न खोजेको कुरा सुनाउँछन्।
‘धेरै जिल्लाका नेताहरूले पनि माधव नेपाल आफैँले फोन गरेर मलाई ओलीजीले थुन्न लागेको भन्ने खबर गरिरहनुभएको छ’, एक नेताले बताउँछन्।
उनले आफ्नो कुरा मात्र गर्दैनन्, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि ओलीले थुन्ने योजना बनाएको सुनाउन पनि छुटाउँदैनन्। ‘मलाई मात्र होइन, शिविर घोटाला र यु’द्ध अ’परा’धको मु’द्दामा पनि प्रचण्डलाई थुन्न खोजका छन्।’
प्रदेश १ प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले दियो १८० मोटरसाईकल र स्कुटर